Welt Felt, Fond Christmas's pendant, Synthetic Felt - Huasheng
Nahatsapa i Eraser
Ny fahatsapana / matevina matevina
loko polyester nahatsapa
Nahatsiaro an'i Viscose
Nahatsapa ny alahelo
Tsapa ny hafanana
Nahatsapa i Jute
Tsapan'ny baolina tenisy
Nahatsapa ny adala
Fanjaitra nanindrona volonta no nahatsapa
Nahatsapa ny jiro
nahatsapa vokatra ireo volon'ondry
kodiarana nahatsapa kodiarana
tombo-kase & gasket
Fananganana sauna felt
nahatsiaro tena ho salama
entana nahatsapa entana
nahatsapa toerana & morontsiraka
nahatsapa harona harona
Nahatsapa ny fananana
anti slip nahatsapa
nahatsapa fanoherana ny famaizana
nahatsapa fibre karbonina
Fotom-baoma vita amin'ny PAN mifototra PAN
Hebei Huasheng Felt Co., Ltd dia naorina ho orinasa matihanina matihanina maro, lamba tsy lamba tenona tamin'ny 1970, ary hita ao Nangong & Shijiazhuang, Sina. Izahay no tokotanin'ny indostrian'ny lamba tsy manenjana any Shina, ary mpanamboatra manohana an'i China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380). Ary mampiditra ny orinasa manafatra sy manondrana: SJZ SINO-SAINT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, ireo vokatra dia aondrana manerana an'izao tontolo izao.
Hebei Huasheng Felt Co., Ltd dia naorina ho orinasa matihanina matihanina maro, lamba tsy lamba tenona tamin'ny 1970, ary hita ao Nangong & Shijiazhuang, Sina.
Izahay no tokotanin'ny indostrian'ny lamba tsy manenjana any Shina, ary mpanamboatra manohana an'i China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380).
NY MPITENINDRANA FOTOTRA FAMPISORANA
Product Product Polyester Felt Material 100% Polyester Thickness 0.5mm-70mm Weight 40gsm-7000gsm Fefatra avo hatramin'ny 3.3m Lava 50m / horonan-taratasy, 100m / horonam-bolo na loko namboarina loko toy ny teknika Pantone loko karana loko tsy fanenitra nisoroka tamin'ny fanamarinana CE, REACH , ISO9001, AZO Polyester fibre (nohafohezina toy ny fibre PET) dia fibre synthetic nakuha tamin'ny spinning polyester natsangan'ny polycondensation ny asidra dibasic voajanahary sy ny alkoholan'ny dihydric. Ny fibre polyester dia ma ...
Voaroy ny tadin-dravina
Type T112 112 122 132 Density (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35 Thickness (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50 kilasy volondianina Austraniana Merino Wool loko miloko voajanahary fotsy / volondolo / mainty na loko Pantone Width 1m Lava 1m-10m Technics Wet baiko fanetsehana ISO9001 & SGS & ROHS & CE, sns 1.Firm. Ny akanjon'ny fibre dia ampifamatotra mafy ary tsy hongotra. 2. fanoherana. Ny volon'ondry voahosotra dia nahatsapa ho mafy orina izay abrasion ...
Lambaovan'ny bobaka maina
Ny volon'olombelona Wool dryer dia vita amin'ny volon'ondry New Zealand 100% foana. Tsy hiondrika izy ireo ary haharitra mandritra ny taona maro. Ny habeny dia tsara indrindra ho an'ny fahombiazan'ny fanamainana farany. Izy ireo dia tsara amin'ny fluffing ny volom-borona toy ny kapa sy palitao. Ny fampiasana basy fanamainty dia mamonjy ny hoditrao amin'ny simika ampiasaina amin'ny lamba fanalefahana sy fanalefahana lamba vita amin'ny rano, ary mamonjy kitaponao amin'ny sisa tavela amin'ireto. Izany dia safidy ara-toekarena natao amin'ny lamba fanosotra simika sy lamba fanosotra poizina ary lamba vita amin'ny lamba. Th ...
Kitapo vita amin'ny fehin-kibo (raharaha momba ny solomaso)
Miaraka amin'ireto tranga fitaratra ireto dia azonao atao tsara ny mametraka ny fitaratrao ho fitahirizana ary hadio hatrany. Ity kitapo volom-bava ity dia mampiasa Slip amin'ny endrika misokatra, mora apetrakao sy esorinao ny solomaso anao. Io kitapo vita amin'ny solomaso io dia tsy vitan'ny mitondra ny solomaso, fa ny lakile, karatra, lipstika ary zavatra kely hafa. Mampiasa lafin-javatra tsapa, malefaka sy mahazo aina tsara io latsaky ny boaty io. Ity kitapo volom-baravarana ity dia mety amin'ny solom-baravarana mahazatra, goggles fiarovana, anti-glare compu ...
Ny takelaka akustika dia vita amin'ny PET 100%, amin'ny fanodinana ny fanjaitra. Ny fizotran'ny famokarana dia vatana ara-batana tanteraka sy ho an'ny tontolo iainana, tsy misy fako, famoahana, fako, tsy adhesive.Ompiara bresterolika vita amin'ny polyou akustika dia mahazo tombony amin'ny tombony maro, izy ireo dia mandoka feo maresaka, manome fifehezana akustika mba hampihenana ny haben'ny feo ao a efitra. Ny takelaka akustika an'ny Pet antsika Tsy misy poizina, tsy alikaola, tsy mikorontana ary tsy manana fatorana formaldehyde ary manana NRC avo lenta: 0.85.100% polyester a ...
Ireo morontsiraka amam-bolo sy toerana
Lisitry ny morontsiraka amam-bolo sy ny kitay Fitaovana 100% merino volon'ondry matevina 3mm 3mm ny haben'ny 4 × 4 '', na loko miloko Pantone loko mamorona loko boribory, hexagon, square, sns. Fomba fanodinana famonoana, famonoana laser. Safidy fanontana Silkscreen pirinty pirinty pirinty pirinty vita pirinty. Safidy famantarana amin'ny marika Laser Scanning, silkscreen, marika vita amin'ny lamba, hoditra vita amin'ny hoditra, sns. Ny fahatsapana volonay 100% dia fananana voajanahary azo havaozina sy azo havaozina izay midika ihany koa fa tsy misy poizina tsy manjary. Izany & ...